फ्लुका बिरामी देखिन थाले, कोभिड र फ्लु कसरी छुट्याउने ? - Nagarik Today
होम » फ्लुका बिरामी देखिन थाले, कोभिड र फ्लु कसरी छुट्याउने ?
फ्लुका बिरामी देखिन थाले, कोभिड र फ्लु कसरी छुट्याउने ?
केही दिनअघि २३ वर्षीया एक महिलामा ज्वरो आउने, घाँटीमा एकदम अप्ठ्यारो जस्तो हुने, खोकी लाग्ने लक्षण देखिए । कोरोनाको आंशकाले उनले पीसीआर गराइन् तर रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । फ्लु जाँच गर्दा भने पोजेटिभ देखियो ।त्यस्तैगरी दुई हप्ता अगाडि एक परिवार रुघाखोकी अनि ज्वरो आउने लक्षण देखिएको भन्दै शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका रिसर्च युनिटका संयोजक डा. शेरबहादुर पुनको सम्पर्कमा आए । उनीहरुले कोरोनाका डरले ३ पटकसम्म पीसीआर गराइसकेका रहेछन् रिपोर्ट नेगेटिभ मात्र देखाइरहेको थियो । पछि फ्लु जाँच गर्दा सबैमा पोजेटिभ देखियो । डा. पुन यस्तै खालका केसहरु फाट्टफुट्ट रुपमा अस्पतालमा आउन सुरु गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार उपत्यकामात्र होइन फ्लुका केसहरु उपत्यबाहिर पनि भेटिन सुरु गरेका छन् ।
डा. पुन भन्छन्, ‘फ्लुका पनि जोखिम छन् । फ्लुको सिजन सुरु भइसक्यो । कोरोनाले ओझेल परेको हो । कोरोना र फ्लुको लक्षण मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि तनाव दिन सक्छ ।’ उनका अनुसार फ्लु ‘ए’ र ‘बी’ले मानिसलाई बढी सताउँछ ।
फ्लु भनेको इनफ्लुएन्जा भाइरसले हुने रोग हो । फ्लुले सबै उमेरलाई प्रभावित पार्ने भएतापनि ५ वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला तथा दमरोगी, मधुमेह, क्यान्सर, एचआईभी एड्स, मुुटुरोगी आदि उच्च जोखिममा रहन्छन् ।
नेपालमा जनवरी–फेबु्रअरी र बर्खाको बेलामा जुलाई–अगस्ट फ्लुको सिजन हो । साधारण फ्लुले पनि स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । निमोनियादेखि अस्पताल भर्ना हुने गरी सिकिस्त बनाउन पनि सक्छ । फ्लुबाट बच्न सरसफाइमा ध्यान दिन जरुरी छ । जोखिम समूहले फ्लुको खोप लगाउन सक्छन् । यसले एक वर्षसम्म काम गर्दछ ।
फ्लु र कोभिड कसरी छुट्याउने ?
फ्लु र कोभिड दुवै श्वासप्रश्वासको रोग भएकाले मिल्दोजुल्दो भएपनि केही फरक भने पक्कै पनि रहेका छन् । दुवै फरक भाइरसबाट बनेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोभिड–१९ कोरोना भाइरस र फ्लु इन्फ्लुएन्जा भाइरसले गराउँदछन् । ज्वरो आउने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, आलस्य महसुस हुने, वाकवाकी तथा पखाला लाग्ने, स्वाद र गन्ध थाहा नपाउने यी दुवै भाइरसका साझा लक्षण हुन् ।
त्यसैगरी दुवै भाइरसको सर्ने लक्षण पनि उस्तै नै छन् । संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्क आउँदा, थुकको छिटाबाट भाइरस सर्न सक्छन् । भाइरस देखिएको मान्छेले सरसफाइमा ध्यान दिने र हाच्छ्युँ आउँदा मुख छोप्ने गर्नुपर्छ ।
यी दुवै भाइरसको सर्ने अवधि फरक हुन्छ । फ्लु ३ दिन अवधिमा सर्ने हुन्छ भने कोराना भाइरस ५ देखि ६ दिनभित्रमा सर्ने गर्दछ । त्यसैगरी रुघाखोकी र फ्लु अलि फरक हुन सक्छन् । रुघाखोकी लागेमा त्यति कडा हुँदैन । नाकबाट पानी बग्ने, सामान्य ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने अनि हाच्छ्युँ आउने हुन्छ । यसका लक्षणहरु केहीदिन मात्र देखिन सक्छन् भने फ्लु लागेमा तपाईंलाई हप्तादिनभन्दा बढी पनि लक्षणहरु देखिन सक्छन् । कोरोनाजस्तै लक्षण देखिएमा एकपल्ट फ्लुको पनि जाँच गराउँदा ढुक्क हुन सकिने विज्ञ बताउँछन् । फ्लुको लक्षण देखिएमा घरमै झोलिलो खानेकुरा खान चिकित्सक जोड दिन्छन् ।
coronaकोभिड र फ्लुफ्लु